🥇 Maareynta qurxinta qurxinta
Qiimeynta: 4.9. Tirada ururada: 790
Maareynta qurxinta qurxinta
Fiidiyowga maareynta qurxinta qurxinta
Dalbo maareyn lagu qurxiyo dharka qurxinta
Maareynta salon qurxinta waa mid ka mid ah hababka gaarka ah ee waxqabadka aadanaha. Sida shirkadaha badan, waxay leedahay astaamo u gaar ah oo saameeya abaabulka, maaraynta, socodka shaqada iyo tababarka shaqaalaha. Barnaamijyada maaraynta qolka qurxinta ee aan aaminka ahayn (badanaa barnaamijyada maaraynta istuudiyaha, oo qaarkood isku dayaan inay bilaash kala soo baxaan internetka) badanaa waxay keenaan guuldarrooyin, iyo la'aanta taageero farsamo oo tayo leh waxay keenaysaa luminta xog la soo ururiyay iyo mid la soo galay Mustaqbalka, tani waxay sababtaa waqti la'aan ay shaqaaluhu ku fuliyaan xakamaynta tayada saloon, iyo sidoo kale maareynta, maaddada iyo xisaabinta, maaraynta shaqaalaha iyo tababarka xarunta qurxinta, iwm. Xalka ugu fiican iyo aaladda lagu hagaajinayo waxqabadka shirkaddaada kiiskan waxay noqon doontaa otomatiga maaraynta salon qurxinta. Haddii shirkaddaadu ay xiiseyneyso abaabulka nidaam maareyn tayo sare leh (gaar ahaan, nidaamka maamulka shaqaalaha iyo xakameynta tababbarkooda), waa wax aan macquul aheyn inaad kaga soo dejiso bilaash internetka. Badeecada ugufiican ee softiweerka uqaban karta howshan waa USU-Soft salon maaraynta barnaamijka qurxinta, kaa oo kaa caawinaya inaad ku hirgaliso qalabaynta agabyada, xisaabaadka, shaqaalaha iyo xisaabaadka maamulka qaybta qurxinta, iyo waliba, inaad ilaaliso waqtiga iyo xakamaynta tayada ee qolka qurxinta, iyadoo la adeegsanayo macluumaadka la helay intii lagu jiray rakibaadda barnaamijkeenna. Barnaamijka maaraynta saalada qurxinta ee USU-Soft-ka waa la habeyn karaa oo si guul ah ayey u isticmaali karaan shirkado kala duwan oo ka tirsan warshadaha qurxinta: qurxinta qurxinta, istuudiyaha qurxinta, qurxinta ciddiyaha, xarunta spa, iyo solarium, massage massage, iwm. USU-Soft as a barnaamijka maaraynta salon qurxinta ayaa muujisay inuu ku fiicnaaday Kazakhstan iyo wadamada kale ee CIS. Farqiga weyn ee u dhexeeya barnaamijka maaraynta USU-Soft iyo waxyaabaha la midka ah ee softiweerku waa fudeydkiisa iyo sahlanaantiisa isticmaalka. Hawshu waxay kuu oggolaaneysaa inaad falanqeyso dhammaan macluumaadka la xiriira dhaqdhaqaaqa qolkaaga saloonku waa mid aad u habboon.
USU-Soft oo ah barnaamij lagu qurxiyo qurxinta ayaa si isku mid ah ugu habboon agaasimaha, maamulka, sayidka qurxinta qurxinta, iyo shaqaalaha cusub ee tababarka qaata. Aaladda otomaatiga ah waxay u oggolaaneysaa falanqaynta xaaladda suuqa, qiimeynta rajada horumarka shirkadda. Dhammaan noocyada warbixinnada ayaa loo sameeyay si ay uga caawiyaan maareeyaha inuu tan sameeyo. Barnaamijka maaraynta salon qurxinta wuxuu noqonayaa kaaliyaha lama huraanka u ah maamulaha salonka qurxinta ee xakamaynta saloon, maxaa yeelay waxay bixisaa macluumaad muuqaal ah oo ku saabsan go'aan qaadashada maareynta miisaaman (tusaale ahaan, in la beddelo gudaha, la soo bandhigo adeegyo kala duwan oo cusub, si loo tababaro shaqaalaha , iwm.) waqtiga ugu yar ee suurtogalka ah. Si kale haddii loo dhigo, nidaamka otomatiga iyo maaraynta qolka qurxinta ayaa gacan ka geysanaya dedejinta howsha, iyo sidoo kale soo gelinta iyo soo saarista macluumaadka. Barnaamijka maareynta ayaa sidoo kale gacan ka geysanaya falanqaynta waxqabadka xarunta qurxinta, taas oo sii deysa waqtiga shaqaalahaaga si ay u xalliyaan dhibaatooyinka kale (tababbarka si loo barto nooc cusub oo waxqabad ah si loo sii dabaqo xirfadahan taas awgeed, kor u qaadista tartanka shirkaddaada). Haddii aad dukaan ku leedahay qolkaaga qurxinta, waxaad ka heli doontaa astaamo badan oo waxtar u leh shaqadaada. Qeybta maamulka ee aad isticmaali doontid badanaa waa 'Iibka'. Markaad gasho qaybtani, waxaad arkaysaa daaqad raadinta xogta ah. Marka ay jiraan wax badan oo galitaan ah, waad sifeyn kartaa shuruudahaaga raadinta si aad ugu fiicnaato shaqadaada. Goobta 'Iibinta Taariikhda' waxay soo bandhigi doontaa dhammaan iibka laga bilaabo taariikh cayiman. Si aad u sameyso, dhagsii falaarta ku taal geeska midig ee berrin bannaan. Daaqada u muuqata, waxaad dooran kartaa sanad, bil, taariikh ama waxaad dejin kartaa taariikhda hadda hal mar adoo adeegsanaya hawsha 'Maanta'. Goobta 'Taariikhda iibinta' waxay kuu oggolaaneysaa inaad soo bandhigto dhammaan iibka illaa taariikh cayiman. Goobta 'Macaamiil' waxay bixisaa raadinta qof gaar ah. Si loo doorto macmiil gaar ah, waa inaad gujisaa calaamadda oo leh saddex dhibic geeska midig ee berrinka. Intaas ka dib, nidaamka maamulka ayaa si otomaatig ah u furaya liiska keydka macmiilka. Kadib markaad doorato macmiilka loo baahan yahay, dhagsii badhanka 'Xullo'. Taas ka dib, arjiga maamulka ayaa si otomaatig ah ugu laabanaya daaqadii raadinta hore. Qofka shaqaalaha ah ee iibka sameeyay waxaa lagu muujiyay qaybta 'Iibi'. Shaqaalahan waxaa laga dooran karaa liiska shaqaalaha keydka keydka. Goobta 'Diiwaangashan' waxaa loo isticmaalaa raadinta shaqaalaha ka diiwaangashan iibka barnaamijka.
Waa maxay waxa ugu muhiimsan ee ganacsi kasta oo adeegyo bixiya? Inbadan waxay dhihi doonaan in qaab kalsooni leh loogu wajaho maamulka, ku guuleysiga tartanka suuqa, awooda soo jiidashada macaamiisha. Shaki la'aan, waxay ciyaareysaa door muhiim ah. Laakiin wali, waxa ugu muhiimsan waa macaamiisha iyo khabiiro wanaagsan. Kuwani waa laba qaybood, la'aanteedna suurtagalnimada jiritaanka qolka saloonku waa mid aan suurtagal ahayn. Waa lagama maarmaan in la soo jiito macaamiisha ugu badan ee suurtogalka ah, iyadoo la adeegsanayo habab kala duwan oo xayeysiis ah, nidaamyo gunno ah, qiimo dhimis iyo dallacsiin. Barnaamijkeena maaraynta salon qurxinta ayaa kaa caawin doona tan, maaddaama ay leedahay shaqeyn firfircoon. Nidaamka maamulku wuxuu abuuraa warbixinno tiro badan. Waxaad arki doontaa waxa xayaysiintu shaqeyso oo soo jiidata macaamiisha iyo wixii aan shaqeyneynin, si aanad lacag ugu bixin si aan micno lahayn oo aad ugu hagaajiso waxa ganacsigaagu u baahan yahay. Ama waxaa jira warbixin muujineysa sababaha ugu waaweyn ee macaamiisha uga tagayaan qolkaaga qurxinta. Waad fahmi doontaa sababta ay tani u dhaceyso, mustaqbalka waxaad sameyn doontaa wax kasta oo suurtagal ah si aad uga hortagto. Muhiim ma aha oo kaliya soo jiidashada macaamiisha, laakiin sidoo kale in la haysto macaamiishii hore. Haddii ay u soo jeestaan martida VIP, waxay noqdaan ilo dhaqaale oo lagu kalsoonaan karo waxayna keenaan faa'iidada ugu xasilloon. Waa muhiim inaad ku dhiirrigeliso macaamiisha noocaas ah inay sii ahaadaan martidaada joogtada ah.
xisaabinta qolka timaha lagu qurxiyo
xisaabaadka goobta qurxinta
xisaabinta dharka timaha
xisaabaadka xisaabinta ee meelaha qurxinta
Xisaabinta macaamiisha hoolka qurxinta
xisaabinta agabyada qurxinta
xisaabinta agabka timo-jaraha
xisaabaadka saqafka ee loo yaqaan 'SPA salon'
Qalabka timaha lagu iibiyo ee loo yaqaan 'Barber Automation'
Maamulka bakhaarka makhaayadaha
Automationka qurxinta qurxinta
Nidaamka maaraynta qurxinta qurxinta
Qalabka qurxinta qurxinta
Barnaamijka kombiyuutarka ee qurxinta qurxinta
Kontroolka lagu qurxiyo
Xakamaynta dukaanka wax lagu jaro
CRM dukaanleyda wax lagu madoobaado
CRM oo loogu talagay qurxinta guriga
Maareynta qurxinta timaha
Qalabka timaha lagu qurxiyo
Galitaanka joornaalada ee macaamiisha makhaayadaha qurxinta
Barnaamij loogu talagalay shaqada qurxinta guriga
Barnaamij loogu talagay dharka timaha lagu xidho
Barnaamij loogu talagalay gogol barre
Barnaamij loogu talagay xisaabaadka
Barnaamij loogu talagay kontoroolka tukaarka
Barnaamijka xisaabinta qurxinta qurxinta
Barnaamij loogu talagalay maareynta qurxinta qurxinta
Barnaamij loogu talagalay istuudiyaha qurxinta
Barnaamij loogu talo galay macaamiisha xisaabaadka kuleh goobta qurxinta
Barnaamijka xakameynta qurxinta qurxinta
Barnaamij loogu talagalay timo-jaraha
Barnaamij loogu talagalay duubista macaamiisha qurxinta qurxinta
Barnaamij loogu duubayo goobta qurxinta
Barnaamij loogu talagalay xarunta SPA
Barnaamij loogu talo galay qalabka lagu qurxiyo
Wuxuu duubista macmiilka goobta qurxinta
Barnaamij fudud oo loogu talo galay qurxinta qurxinta
Nidaamka qurxinta qurxinta